एपिएलमा पनि चम्किए सन्दीप, एकै ओभरमा लिए २ विकेट ! – Everest Dainik – News from Nepal
एपिएलमा पनि चम्किए सन्दीप, एकै ओभरमा लिए २ विकेट !
काठमाडौं, असोज २९ । जारी अफगानिस्तान प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमै नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले शानदार बलिङ गरेका छन् । उनले नगरहर लियोपार्डको लागि खेल्ने क्रममा २ विकेट लिंदै राम्रो बलिङ गरेपनि पक्तिया प्यान्थर्ससँग टिम भने ७ विकेटले पराजित हुन पुग्यो।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै नगरहरले १२६ रन मात्रै बनाउन सक्यो । १२७ रनको लक्ष्य पक्तिया प्यान्थर्सले १४.४ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। प्यान्थर्सको जितमा कप्तान मोहम्मद शहजादले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै ४३ बलमा ८ छक्का र ४ चौका मदतले अविजित ७८ रन बनाए।
सन्दिपको शानदार बलिङ
टिमको लागि पहिलो ओभर बलिङ गर्ने क्रममा भने सन्दिप महँगो सावित भएका थिए। उक्त ओभरको दोश्रो र तेश्रो बलमा चौका तथा अन्तिम बलमा इन्सानउल्लाहले छक्का प्रहार गरेपछि सन्दिपले १८ रन खर्चेका थिए।
त्यसपछि आठौं ओभरमा दोश्रो ओभर बलिङ गर्न आएका सन्दिपले राम्रो कमब्याक गर्दै मात्र १ रन खर्चे । लगत्तै तेश्रो ओभर बलिङ गर्न दशौं ओभरमा आएका सन्दीपले एकै ओभरमा २ विकेट लिए।
ओभरको चौथो बलमा सन्दिपले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रिय क्रिकेटर समेत रहेका क्यामरुन डेल्पोर्टलाई सर्ट मिड-विकेटमा क्याच थमाए। त्यसपछि पनि सन्दिप रोकिएनन् र ओभरको अन्तिम बलमा जिम्बाबे क्रिकेटर सिकन्दर राजालाई गुग्लि गर्दै बोल्ड गरे। उक्त ओभरमा सन्दिपले मात्र २ रन खर्चेर २ विकेट लिए।
त्यसपछि १२ औं ओभरमा स्पेलको अन्तिम ओभर गरेका सन्दिपले विकेटको २ वटा एलबिडब्लुको मौका श्रीजना गरे विकेट भने प्राप्त गर्न सकेनन्। ओभरमा मात्र २ रन खर्चेका सन्दिपले ४ ओभरमा मात्र २३ रन खर्चेर २ विकेट लिए।
पहिलो ओभरमा १८ रन खर्चेका सन्दिपले त्यसपछि शानदार बलिङ गर्दै १८ बलमा मात्र ५ रन खर्चेर २ विकेट समेत हात पारे। यस क्रममा सन्दिपले दोश्रो स्पेलमा गरेको १८ मध्ये १३ बलमा कुनै रन दिएनन्। शानदार बलिङ गरेपछि कमेन्टेटरहरुले सन्दिपको प्रसंशा गरे भने खेल लगत्तै सन्दिपको अन्तर्वार्ता समेत लिएका थिए।
लिगमा लगातार दोश्रो हार बेहोरेपछि सन्दिपको टिम नगरहर अंकतालिकामा ७ खेलमा २ जित र ५ हार बेहोर्दै चौथो स्थानमा रहेको छ। लिगको अन्तिम खेलमा नगरहरले अक्टोबर १७ तारिक बुधबार बल्ख लेजेन्ड्ससंग खेल्ने तालिका रहेको छ।
लिगमा सहभागी ५ टिम मध्ये ४ टिम सेमीफाइनल पुग्ने हुँदा अब अन्तिम खेलमा नगरहरलाई जित आवस्यक हुनेछ भने अंकतालिकामा अन्तिम स्थानमा रहेको कन्दाहर नाइट्सको प्रदर्शनको समेत प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ।